UKHETHO LOMGXEKI: IIALBHAM ZEJAZZ EZILUNGILEYO ZASEHLOTYENI-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Ukhetho lwabagxeki: iialbham zejazz ezilungileyo zasehlotyeni
U-Ambrose Akinmusire: Xa Intliziyo Iphuma Ekhazimulayo (Inqaku Elihlaza okwesibhakabhaka): Ixilongo elincinane elivela e-East Bay liphonsa zonke ii-cliches ukuze zifike kwi-conception entsha, njengoko uBooker Little kunye noDon Cherry benza emashumi eminyaka ngaphambi kwakhe. Iimpawu zakhe kunye nokukhetha kwakhe amanqaku ahlala eyothusa. Iingoma zakhe zimnyama-kwaye ngandlela ithile ziyakhazimla, nazo. Iingoma ze-13 zenziwa yi-quintet yakhe enamandla yokusebenza; ngabahlobo kunye noontanga, abaye bakhulela kulo mculo kunye.
UBruce Barth: Uhlala eSmall (encinci LIVE): Irekhodwe kwiklabhu yangaphantsi eyaziwayo eGreenwich Village, le disc ibamba umdlali wepiyano uBarth kunye ne-scrappy trio yakhe phambi kwabaphulaphuli be-simpatico. Iqela liyabhomboloza; Ngokwenyani unokuziva iiathom zingcangcazela emoyeni. Kubonakala ngathi ngumlingo, kodwa ngokwenene yintaphane kunye nokuhamba kwabaphuculi abathathu abanamava: uBarth, i-bassist uVicente Archer kunye nomdlali odlala igubu uRudy Royston. Uninzi lweengoma zezemveli zenkokeli, ezithathwa kwikliphu yenqanawa.
UJames Carter: I-Caribbean Rhapsody (EmArcy): Apho i-saxophonist i-soloist yomqambi uRoberto Sierra's Concerto yeSaxophone kunye neOkhestra. Ngokulunga kwakhe okunyakazelayo - ukuthamba, emva koko ukubhuda; Ukuqhekeka, kodwa kuchaneke ukufa - uCarter udanisa ngomsebenzi oqaqambileyo waseSierra, owenziwa yiSinfonia Varsovia Orchestra.
Abapheki: Phosa iLitye lokuQala (Plus Loin): Abanye abadlali abaziintshatsheli ze-'60s kunye ne'70s - abantu abeza no-Art Blakey, uMax Roach, uMcCoy Tyner kunye nabanye-bafumene ikhaya elitsha kule yunithi yeenkwenkwezi zonke. . Sithetha ngeesaxophonists uBilly Harper kunye noAzar Lawrence, ixilongo u-Eddie Henderson, umdlali wepiyano uGeorge Cables, u-bassist uCecil McBee kunye nomculi uBilly Hart. Ungaphindi, akunjalo? Ukudlala iqela elinamandla lemvelaphi, badityaniswa apha ngumdlali wesaxophonist uCraig Handy kunye nexilongo uDavid Weiss, umququzeleli wale projekthi.
Chick Corea, Stanley Clarke, Lenny White: Forever (Concord): Kukho into entsha etsibayo umntu ngamnye kumamela le 2-disc smorgasbord: Corea kunye White besebenza inguqulelo yeColtrane's Crescent ngexesha lokuziqhelanisa, okanye u-Chaka Khan ejoyina iqela. ngenxa yocingo oluphezulu olothusayo - I-Aerialist. Uyamangalisa, njengoko kunjalo ngabathathu bamaqabane amadala. Nditsho ne-500 Miles High - yiza, akunjalo? - isachulumancisa, irekhodwe apha eHollywood Bowl kwaye ibhubhudla ecaleni kwemigca yebass eqhutywa entwasahlobo kaClarke.
U-Eliane Elias: Khanyisa uMlilo Wam (I-Concord): Ngokunyanisekileyo, ndingalahlekelwa yingoma yesihloko kunye ne-My Cherie Amour. Kodwa iingoma zomculo wepiyano zaseBrazil ibossa-samba - malunga nesiqingatha secwecwe - zizodwa, zikhethekileyo xa uGilberto Gil emjoyina. (Ukwiingoma ezintathu.) Iqela lomculo, elinomdlali wesiginkci uOscar Castro-Neves, libalaseleyo.
UPeter Evans: Iziporho (uPeter Evans Quintet): Ukudlala ixilongo kwinqanaba eliphezulu. Zonke i-synapses ziyadubula. I-Bebop exuberance idibana nohlobo oluthile lwe-post-modern, i-Digital Age whimsy kunye nobukrelekrele bobuchopho.
U-Abdullah Ibrahim kunye no-Ekaya: I-Sotho Blue (i-Sunnyside): iingoma kunye neengoma zasesitalatweni zaseMzantsi Afrika, i-evocations ye-Ellington, i-deep balladry: umxube ongaqhelekanga osuka kulo mqambi wepiyano osandula ukuhoywa. I-Ekaya yi-septet ka-Ibrahim ende; Apha ibandakanya abadlali abancinci abanomdla, kubandakanywa umdlali wetenor oqinisekileyo we-saxophonist uKeith Loftis.
URobert Hurst: Unrehurst, uMqulu 2 (Bebob Records): Kuloluhlu lwee-CD eziphezulu ze-20, irekhodi elitsha le-bassist ye-bassist ibeka ngokulula kwiindawo zam ezintlanu eziphezulu. Irekhodwe ngqo eMsi, iklabhu yaseManhattan, iyavutha kwaye iyakhazimla, ijikeleza phakathi kokutshisa okumhlophe kunye nobushushu obubomvu. Yijazi ekutsalela kuyo kwi-vortex yayo entle. U-Hurst udityaniswe nomdlali wepiyano uRobert Glasper kunye nomdlali wedrama uChris Dave, ababini babadlali ababalaseleyo abajikeleze.
UJon Manasse kunye noJon Nakamatsu: Umculo waseMelika weClarinet & Piano (Harmonia Mundi): UClarinetist Manase kunye nomdlali wepiyano uNakamatsu ngabadlali abaphambili beklasikhi abakwicwecwe labo lamva nje elihleli ngokukhululeka kwi-jazz. Bazulazula ngokugqwesileyo kwiseti entsha yamalaphu ngumqambi uJohn Novacek, kwaye bafaka intshukumo emine kaPaquito D'Rivera enemoods ezinzulwini zobusuku. Kukwakho nomculo kaBernstein noGershwin, kwaye ukudlala kuyo yonke indawo kuhle kakhulu.
I-Bait kaLisa Mezzacappa kunye noTshintsho: Yintoni eyaziwayo (Ukutya okucocekileyo): Akukho phobias evunyelweyo: I-amalgam ye-bassist ye-avant-garage yinkululeko (kunye ne-craft) eyenziwe ngumntu. Ukuba ukwi-Ayler, Shepp, Sharrock okanye uCaptain Beefheart, uya kulixabisa eli qela lamandla apheleleyo.
IOkhester yeSizwe yeJazz: Engqonge uRobert Wyatt (Bee Jazz): Yakhelwe ngeenxa zonke kwiingoma nguWyatt, iimvumi ezinegubu leSoft Machine, le yingxubevange yepop-jazz. Yinto efana noGil Evans (ogqwesileyo kwabaququzeleli bakudala) udibana noGuillermo Klein (ogqwesileyo kwentsha), kunye noonodoli bephupha lobuhle be-Beach Boys kunye no-Tom Waits ongaqhelekanga. UVincent Artaud ulungiselela iqela eliselula labadlali abacula yedwa, kunye noWyatt phakathi kwabaculi, abafana neziqholo, ngamnye wabo uboleka incasa entsha eyomeleleyo kwinkqubo.
UPutumayo Ubonelela ngeJazz (iPutumayo): Enye yeyokosa yakho yasehlotyeni. Sukuzitshisa nje iibhega: Wena kunye nabo bonke abanye abantu niza kube nidanisa kanye xa uNina Simone ecula kwi-My Baby Just Cares for Me. Zininzi izinto zakudala apha: uLouis, uBillie, uZoot, njl., njl.
U-Ed Reed: Wazalelwa ukuba yiBlue (Blue Shorts): Imvumi yaseRichmond ibeka engqondweni yam uJimmy Rushing, uJoe Lee Wilson, u-Abbey Lincoln - abantu abacula (okanye bacule) ukusuka emathunjini, kumava obomi, beyenza kunye ubuhandiba kunye nobulumko, ngelixa uziva ngaphakathi kwingoma. IReed igubungela umhlaba omninzi apha, ukusuka kwiCannonball Adderley (iLizwe eliDala) ukuya kuSammy Cahn noJimmy Van Heusen (Yonke Ingomso Lam). Kwaye unecandelo lesingqisho esinovelwano, encediswa ngumdlali wesaxophonist uAnton Schwartz.
UAlfredo Rodríguez: Izandi zeNdawo (Qwest): Umdlali wepiyano osemncinci waseCuba udlala njengokungathi udla iChopin kunye neStockhausen isidlo sasekuseni. Ngaphaya kobuchule obuqhutywa yi-conservatory, uvutha ekhaya kunye neefom ze-Afro-Caribbean kunye nezingqisho kwaye uye wetyisa amashumi ambalwa eminyaka endaleko yepiyano ye-jazz ye-jazz, eyibilisa yonke ngobukrelekrele.
Tarbaby: Ukuphela Koyiko (Posi-Tone): Ukuba uthanda i-jazz yakho inzima njengezikhonkwane, imisipha kunye ne-blues-rich, i-swing njenge-crazy, kodwa ihamba kancinci kwisiphelo esinzulu, kwakhona, uthi molo kuMnu Dolphy, ehleka , ukunyamekela kunye nokuthetha inyaniso - ke eli libhendi yakho. UTarbaby (umdlali wepiyano u-Orrin Evans, umdlali we-bassist u-Eric Revis kunye ne-drummer uNasheet Waits) ubamba iindwendwe ezininzi kule CD: i-saxophonists u-Oliver Lake kunye no-J.D. Allen kunye nexilongo u-Nicholas Payton, otyhala umculo kwi-pitch ebilayo kwi-Hesitation.
UCharles Tolliver Big Band (Mosaic Khetha): Le seti ye-3-CD iquka icwecwe lexilongo lokuqala lomculo wexilongo, enye yezona zinto zirekhodiweyo zejazz zokugqibela ze-40-plus iminyaka. Andiyibaxi. Ekuqaleni yayinesihloko esithi Umculo Inc. kwaye yarekhodwa ngo-1970 kwileyibhile eqhutywa ngumculi i-Strata-East (u-Tolliver wayengumseki-ntsapho), ibamba i-jazz ngexesha apho ukuthembeka kwayo esitratweni kwakusekuko kakhulu. Ii-solo zikaTolliver azikholeleki: Uyagqabhuka, uyadada, uyakunkqonkqoza ngomphefumlo wakhe. Kwaye iingoma ziya phezulu kwaye zivakala: Intliziyo kaRuthie, Mzi wakwaSaud, kuMfula iNayile - bezisoloko zindenza ndigodole okoko ndandikwishumi elivisayo. Kwakhona kule phakheji: Impembelelo, umhla weqela elikhulu ukusuka ngo-1975, phantse ulungile, kunye neseti esanda kufunyanwa edibanisa iTolliver kunye neNDR Big Band yaseHamburg, eJamani, ukusuka ngo-1979.
I-Trio Dolce Vita: Amarcord (Jazzwerkstatt): Ubuhle obumangalisayo kunye nobubi kule rekhodi ye-Nino Rota tunes yi-trio yaseSwitzerland-German: Claudio Puntin (clarinet, bass clarinet, glockenspiel), Jorg Brinkmann (cello, electronics), Johannes Fink (bass ). Izinto zePrimo. Ukuba uyamthanda uFellini...
UDavid Weiss kunye neNdawo yokuHamba: I-Snuck Out (i-Sunnyside): Ibhendi yokutshaya ngokupheleleyo ekhokelwa ngumvutheli wexilongo, apha ilwela iingoma ezingaziwayo ii-'60s zikaCharles Tolliver, uWayne Shorter nabanye. Le quintet ibonisa i-tenor saxophonist u-J.D. Allen, ojika isibini sokutshisa ngokukrakra kunye ne-solos eyenziwe ngokugqibeleleyo; ukuba awumazi, kungekudala uya kuba yintandokazi. UJamire Williams ngoyena mntu udlala igubu ngeli xesha lidla ngokuphila.
U-Anthony Wilson: UCampo Belo (Induli yeBhokwe): I-ace yesiginci esekwe kwi-LA irekhode oku e-São Paulo nge-gutsy, icandelo lesingqisho lase-Brazilian elijikelezayo, elinongwe nge-clarinet kunye ne-accordion. Jonga Edu; le rekhodi iyakhazimla.
Qhagamshelana noRichard Scheinin kwi-408-920-5069.